Qaab | KONGOLISOLO
Tayada waxbarashada la siinayo fasalada hoose waa inay noqotaa kuwa ugu liita sidaa darteed farqiga jahliga ee ka go'ay fasalka hoose iyo fasalada sare ...	Akhri wax dheeraad ah
Taasi waa inuusan aaminin qofna gaar ahaan walaalkiis, laakiin taa badalkeeda colonizer. Isaga ayay been ugu sheegaan dugsiga, oo waxay isaga ugu seexdaan kaniisadda, masaajidka ay ku ...	Akhri wax dheeraad ah
Wuxuu soo gabagabeeyey in nidaamkani uu kharribay madow / Afrikaan; sidaa darteedna uma oggolaan karin inay horumar sameeyaan: kuma qancin karno nidaamka waxbarashada ee caddaanka, s ...	Akhri wax dheeraad ah
Xirfadda aasaasiga ah ee jaamacaddu waa "Cilmi-baaris", qof naftiisa ugu yeera jaamacad waa inuu noqdaa cilmi-baarayaal, waa inuu leeyahay karti fikradeed oo la xaqiijiyay. L ...	Akhri wax dheeraad ah
Waajibka ah in la Xusuusto: xaggee ayay Maalinta 8-da Maarso ka soo baxday? 8-da Maarso, waa maalinta haweeneyda mise maalinta haweenka shaqeeya?
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 8, 2020 03: 10 No Comments
Miyaanu u xusnaa shaqaalaha New York ee ku dhintey dab ka kacay warshad dharka lagu sameeyo sanadkii 1908, mise dabkan ayaa ah halyeey? Garyaqaanka Jarmalka ee Clara ...	Akhri wax dheeraad ah